Vaovao - teboka fanaraha-maso kalitao manintona telo sy fitsaboana amin'ny kilema
Teboka fanaraha-maso kalitao avo telo heny sy refy fitsaboana
Ny haingam-pandrefesana mafana mahavariana telo dia fampifangaroana ny vokatry ny fanindriana ny fipoahana sy ny fametahana mafana, izay misy vokany tsara amin'ny fanoherana sy fanaovana hosoka sy kanto, noho izany dia be mpampiasa izy io. Saingy ny fifehezana kalitao ny fanaovana haingam-pandeha telo-be dia olana somary sarotra ihany. Ity taratasy ity dia milazalaza fohifohy ireo teboka fanaraha-maso kalitao haingam-pandeha telo ary fanodinana kilema, ny atiny ho an'ny namana:
Ny kalitaon'ny nohomboana mafana amin'ny lafiny telo
Omeo kilalao feno ny toetran'ny fitaovana anodized sy plate, amin'izay ny fitaovana, fitaovana, tontolo iainana, mari-pana, tsindry, hafainganam-pandeha ary anton-javatra hafa ary fanontana eo anelanelan'ny fananganana fitambarana tsara, ny fananganana ny fandanjalanjana tsara indrindra, ary farany hamokarana vokatra fanaovana stamping mafana mahavariana telo-metatra.
Raha ampitahaina amin'ny takelaka fanaovan-tsolika mahazatra sy ny takelaka fanaovana embossing, ny fizotry ny famokarana ny takelaka fametahana telo-habe amin'ny toerana iray ihany, ary misy fahasamihafana lehibe. Satria ny fametahana hafanana telo-mirefy dia fametahana mafana na fipoahana fanaovan-gazety mba hamenoana ny fizotrany, noho izany dia avo kokoa ny endriny nohitsakitsahana mafana noho ny fenitra manara-penitra mafana sy ny embossing izay avo lenta kokoa, takiana fanaovana takelaka no henjana kokoa, sarotra kokoa ny fizotrany. , ohatra, ny kinova fanaovam-panavotana mahazatra an'ny die ambany dia fisaka, tsy mila amboarina manokana, ary ny stamping mafana misy refy telo noho ny famolavolana ny endrika fanampiana telo-habe, noho izany dia tsy maintsy Miaraka amin'ny kinova mafana izay mifanaraka amin'ny litera famolavolan-dehilahy, izany hoe ny tsindry mafana amin'ny ampitson'ny fialan-tsasatra any amin'ny farany ambany dia tokony hatsangana, ary ny haavon'ny bontsibontsina sy ny tsindry mafana dia mifanaraka amin'ny kinova amin'ny halalin'ny fitsaharana.
Ny takelaka fanaovana pirinty mafana avo lenta dia fototra iray lehibe hijerena ny kalitaon'ny vokatra fanaovana stangam-pandrefesana telo-lehibe. Ny dikan-tsindry mafana dia tsy maintsy vita amin'ny fitaovana metaly avo lenta, amin'ny ankapobeny vita amin'ny takelaka varahina amin'ny sokitra laser. Ny vy tsy misy fangarony koa dia ny famokarana kinova fametahana mafana ny fitaovana tena tsara, noho ny faritra malama dia tsara, raha ampitahaina amin'ny kinova varahina, dia avo kokoa ny vokatry ny fametahana lahatsoratra vita amin'ny vy matevina ary ny famaritana dia avo kokoa, ny vokan'ny concave sy convex tsara kokoa ny tsindry.
Satria ny dikan-tsindry mafana dia miasa eo ambanin'ny mari-pana avo sy ny tsindry ambony, ny lesoka kely izay tsy miharihary amin'ny toe-javatra mahazatra dia mety hisy fiatraikany lehibe amin'ny kalitaon'ny vokatra. Noho izany, ao amin'ny kinova fanerena mafana fanaraha-maso kalitao dia tsy maintsy miezaka ny hanana hatsarana, mba hialana amin'ny olana miafina kalitao avy amin'ny loharano.
Amin'ny ankapobeny, ny dikan-tsindry mafana dia tokony ho hatevin'ny fanamiana, lamina, sokitra mazava, lalindalina tsy miova; Faty maty tokony ho fisaka tsy misy rangotra, mitovy habe, tsy misy triatra, henjana; Ny dikan-tsindry mafana sy ny maty any ambany dia tsy mety hitan'ny mason'ireo maso mihanjahanja, mirodana, miboiboika, burrs ary lesoka hafa.
Ny kalitaon'ny anodized mivantana dia mamaritra ny fisehoan'ny vokatra stamping mafana telo refy. Ny kalitaon'ny alimina anodisedra efa voafaritra dia tsy tokony hisy pentina mamirapiratra, teboka mainty na lasitra takelaka laser, malefaka sy mangarahara ny sosona miaro amin'ny faritra, tsy misy zavona sy volondavenona. Raha ny fizahana jiro anodized dia tsy tokony hisy pentina fotsy hita, teboka maloto, teboka lakaoly, lavaka fasika ary kileman-toetra hafa.
Ho fanampin'ny fisehoana ivelany, ny fanatanterahana mafana ny oksida aluminium dia tena ilaina ihany koa. Izy io dia iray amin'ireo singa manapa-kevitra misy fiatraikany amin'ny kalitaon'ny fitomboan'ny hafanana, ary ny firaiketam-pony, ny hery manosika ary ny fanoherana ny fiatraikany dia tapa-kevitra avy hatrany amin'ny fampisehoana hainganana azy mafana. Mba hahazoana antoka fa ny aliminioma elektrika tsara indrindra dia afaka mampiseho ny fahombiazana mafana indrindra, tsy tokony hifidy tsara fotsiny ny taratasy, ny ranomainty, ny menaka maivana, ny firakotra simika, toy ny varnish, koa ny fizotran'ny fizotran'ny fizarana mafana toy ny mari-pana, ny hafainganam-pandeha, ny fanerena hametrahana antonony , dia tokony hiezaka koa hahamay alohan'ny famokarana betsaka, mba hahazoana antoka ny vokatra rehefa famokarana betsaka.
Ankoatry ny fanamafisana ny fananana vy mety amin'ny anodized aluminium amin'ny alàlan'ny fanandramana fanandramana dia tokony hampiasaina fitaovana manokana na kasety koa hizaha toetra ny tavy peel, fanoherana ny fiantraikany ary toetra hafa an'ny alim-bary anodized. Raha toa ka kely loatra ny tanjaka peel amin'ny alimina anodized, amin'ny fizotran'ny famindrana stamping mafana dia mety ho toa mandatsaka aluminium na mamindra olana mahantra; Mifanohitra amin'izany, sarotra ny mamindra tanteraka ny anodized, tsy miseho noho ny lesoka amin'ny kalitao ny fanaovana stamping mafana. Raha ratsy ny fanoherana ny anodize, ny olana amin'ny fandatsahana aliminioma dia hitranga mandritra ny fanerena ny concave sy ny convex, ary ny fanatanterahana ny vokatra vita dia ny ampahany matevina tsy feno sy simba. Noho izany, ny fepetra voalohany hamahana ny fizotran'ny fanamafisam-peo amin'ny alim-baravarana telo, tsy feno, mamolavola, fisarahana fisarahana ary lesoka hafa kalitao hafa dia ny fahazoana tanteraka ireo toetra isan-karazany amin'ny alimina anodized. Amin'ny famokarana fametahana hafanana sigara telo-habe amin'ny fonosana sigara, dia matetika no voafantina ny holographic laser anodized aluminium miaraka amin'ny fanoherana ny hafanana avo sy ny fanoherana ny sandoka. Ity karazana aluminium anodized ity dia manana tanjaka peel tsara sy fanoherana ny fiantraikany, tsy mora ovaina, ary mety amin'ny fampisehoana haingam-pandeha, ka afaka miantoka tsara ny kalitaon'ny vokatra vita.
Ho fanampin'izany, ho an'ny toeran'ny telo-habe fametahana takelaka anodized takelaka mafana dia tsy maintsy mifanaraka, tsy afaka mihoatra ny hadisoana napetraka amin'ny dingana (hadisoana <0.1mm). Satria amin'ny kajy ny stamping mafana, ny halaviran'ny lovia no mason-tsivana amin'ny mason'ny laser, na dia misy lesoka kely fotsiny aza, aorian'ny fanerena mafana be, dia hahagaga ny fahadisoana mitambatra, indraindray hatramin'ny folo santimetatra aza, ka miteraka be dia be ny fako ara-nofo, noho izany ny elanelan'ny takelaka anodized dia tokony fehezina tsara.
Ao amin'ny fizotry ny fametahana haingam-pandeha telo-refy, manomboka amin'ny "mafana" sy "tsindry" lafin-javatra roa amin'ny fifehezana kalitao, hialana amin'ny fametahana tsy dia tsara, ny fihenan'ny ranomainty, ny fitomboana mafana dia tsy kileman-toetra avo lenta; Mba hanitsiana ny diloilo vita amin'ny alim-pito vita amin'ny oksida aluminium, verinia, varnish eo amin'ny fifandraisan'ny firaisana; Mila manangana teboka fanaraha-maso kalitao ao amin'ny milina fanontana ihany koa, jereo tsara ny habetsaky ny ranomainty, ny vokatra fanamainan'ny ranomainty, ny habetsaky ny famafazana vovo-dronono amin'ny fizotran'ny fanerena mafana, ary ny fifehezana henjana, hamaha ireo olana ara-kalitao.
Ho an'ny fifehezana ny mari-pana toy ny teboka manan-danja amin'ny fanaraha-maso kalitao mafana telo-refy, fanaraha-maso henjana ny fotoana mialoha ny hafanana, ary hiantohana ny fiakaran'ny maripana, ny haavon'ny haavo ary ny haingam-pandam-pandehanana mafana hitazomana. Ny habetsaky ny fonosana adhesive miempo mafana anodized dia kely dia kely, ka raha misy fihenan-tsolika kely amin'ny hafanana mitentina mafana dia hisy fiantraikany mivantana amin'ny kalitaon'ny famindrana aliminioma anodized. Ankoatr'izay, ny fonosana vita amin'ny anodized an'ny sosona aluminium vita amin'ny vy dia manify ihany koa (ny hatevin'ny 1 ~ 2μm fotsiny), ary tena mora tohina amin'ny fiovan'ny mari-pana, noho izany dia tsy maintsy mifehy tsara ny mari-pana nohitsakitsahana isika.
Saingy ny fifehezana ny mari-pana dia tsy mora fehezina, noho izany amin'ny fizotry ny famokarana, matetika noho ny fiovan'ny mari-pana amin'ny hafanana sy ny olana amin'ny kalitao. Ohatra, ambany loatra ny mari-pana amin'ny fametahana hafanana, tsy dia ampy ny fihenan'ny lakaoly miempo anodized, mora tohina mafana tsy feno, apetaka apetaka, nohitsakitsahana mafana, volo sy kileman-toetra hafa; Rehefa avo loatra ny mari-pana amin'ny stamping mafana dia hiempo ny velaran'ny sosona aluminium anodized, hisy ny fisehoan-javatra miparitaka, nefa koa mamoaka loko, zavona ambonin'ny tany, tsy misy gloss amin'ny laser ary kileman-toetra hafa. Ankoatr'izay, ny foam-bolo, aliminioma, ny peeling ary ny lesoka hafa ary ny fanaraha-maso ny mari-pana amin'ny fametahana hafanana dia manana fifandraisana lehibe, ny mpamokatra dia tokony hiorina amin'ny fahombiazan'ny kalitaon'ny hadisoana mba hanitsiana ny hafanana nohomboana.
Mba hahafahana mamokatra vokatra haingam-pandrefesana telo-mirefy ary vokatra azo tsongoina ho an'ny concavex sy convex azo ampitahaina, dia ilaina ny miantoka ny vokatra fanosehana mafana amin'ny fotoana iray, ny kalitaon'ny fanaraha-maso ny tsindry sy ny tsindry. Satria ny stamping mafana mahavariana telo heny dia vita amin'ny fotoana iray ihany ary manindry ny dingan'ny concave sy ny convex, ny haben'ny tsindry dia tsy misy fiantraikany amin'ny fametahana anodide fotsiny, fa koa mifandraika amin'ny vokatry ny press concave sy convex, indraindray mety misy tsy fifanarahana tsy azo ihodivirana eo amin'ny roa. Ohatra, ny tsindry napetraka somary lehibe kokoa, azonao atao ny mampitombo ny firafitry ny anodization amin'ny taratasy, tsara ho an'ny nohitsakitsahana mafana, fa amin'ny fizotry ny press concave sy ny convex taratasy mety simba.
Noho izany, mba hahatratrarana ny stamping mafana tsara indrindra amin'ny alàlan'ny tsy fanosehana taratasy, ilaina ny mametraka tsara ny tsindry, ary manitsy ny haavon'ny fipetrahana manindry mafana, ny fikajiana marina ny fatana sy ny vodin-tsofina ambany, ho alao antoka fa ny kinova fanerena mafana rehetra sy ny haavon'ny maty ambany, ny fisainana dia tsy miova. Ho fanampin'izany, fa koa hijerena ny kalitaon'ny fanaraha-maso farany ambany, indrindra fa ny fahafatesan'ny farany ambany dia naharitra am-polony heny ny fanoherana ny fiatraikany, tokony homena maso manokana ny fizahana ny mari-pahaizana deformation sy ny hamafin'ny farany ambany, ary ny fanoloana ara-potoana ny ambany tonta maty.
Fikarakarana tsy mety
Amin'ny fizotry ny fametahana haingam-pandrefesana telo-be dia mety hitranga ny lesoka kalitao amin'ny fotoana rehetra, ary mila karakaraina ara-potoana. Anisan'izany, ary ny fahaizan'ny ranomainty anodized dia mifandray akaiky amin'ny lesoka lehibe ao anatin'izany ny adhesion anodized, ny sintomina miverina amin'ny ranomainty, ny fitombenana mafana, ny aliminioma tsy feno sns.
Mifamatotra amin'ny ratsy
Ao amin'ny fizotry ny fametahana haingam-pandrefesana telo-refy, ny tsy fahombiazan'ny fametahana anodized dia aseho matetika amin'ireto lafiny roa ireto: ny antony koa tsy mitovy.
Ny iray dia ny aluminium alim-bolo tsy azo apetaka tsara amin'ny tontolon'ny fanontam-pirinty, ary mety ho fitomboana hafanana tanteraka aza, ary ny fisehoan'ny aluminium na ny tsy fahafenoana lehibe dia hiseho rehefa sintonina ilay kasety. Amin'ny famakafakana farany, izany dia vokatry ny firaiketam-po ratsy amin'ny aluminium anodized, amin'izao fotoana izao ny filàna fanatsarana ny fahombiazana mafana mety amin'ny aluminium anodized, na ny fanoloana ny alimina anodized vaovao.
Ny iray hafa dia nohitsakitsahana rehefa vita ny aliminioma anodized azo apetaka tsara amin'ny tontolon'ny fanontam-pirinty, saingy hisy ny fisintahana miverina amin'ny ranomainty. Ity fisehoan-javatra ity dia vokatry ny tsy fitovian'ny ranomainty, ary ny fanamafisana ny fanontana sy ny fanontana an-taratasy ary ny fanamainan'ny ranomainty dia tsy mifandraika tanteraka amin'ny anton-javatra hafa, amin'izao fotoana izao dia mila manatsara ny ranomainty fanontana sy ny takelaka amin'ny taratasy isika, na manitsy ny tahan'ny fanamainan'ny ranomainty .
Very Stamping Very
Ny antony lehibe mahatonga ny fahaverezan'ny fametahana mafana dia ireto manaraka ireto: ny iray dia vovo-tany be loatra eo ambonin'ny fanontam-pirinty, izay no antony mahazatra indrindra; Roa dia ny ranomainty dia tsy maina tanteraka amin'ny fitomboka mafana; Fahatelo, ny velaran'ny sosona ranomainty dia rakotra sosona verinia mpiaro, verinia ary fonosana resin hafa, mba tsy hanana "afinina". Ny fihaonana amin'ny hainganana mafana fa tsy amin'ny olan'ny kalitao, tsy maintsy mizotra amin'ny zava-misy isika, famakafakana manokana ny olana manokana, aza maika ny fanaovana hajia mafana, hisorohana ny famokarana lozam-pifamoivoizana be dia be.